Soavaly Percherón | Soavaly Noti
Carlos Garrido | | Karazan-tsoavaly
Ao amin'ny tontolon'ny soavaly dia sambatra isika manana karazana maro izay manome io biby tsara tarehy io mampiavaka manokana. Saingy, misy iray manokana, izay mamirapiratra amin'ny hazavany manokana noho ny fiakarana sy ny fahamendrehany. Miresaka momba ny zavatra tsy mety diso isika soavaly percheron.
2 Mampiavaka ny soavaly percheron
2.1 Ny habe sy ny lanja
3 Soavaly percheron belza
4 Ilay soavaly percheron Espaniola
5 Soavaly percheron tampony
6 Ohatrinona ny soavaly ampondra?
7 Ilay soavaly percheron lehibe indrindra eto an-tany
Ny lasa an'ity soavaly ity dia tototry ny feon-teny frantsay. Avy tany amin'ny faritanin'i Le perche, eo akaikin'ny Normandie (France), biby ampiasaina amin'ny asa eny an-tsaha izy mba hisintomana fitaovan'ny fambolena, sarety sns., Noho ny tanjany lehibe.
Manome toky ny manam-pahaizana Equine fa ny soavaly arabo dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fahaterahan'ity tantara ity sy karazana manokana. Raha ny zava-misy mahaliana dia voalaza fa ny ray aman-drenin'ny soavaly Percheron dia lehilahy iray antsoina hoe jean leblanc ary soavaly tsara tarehy, izay nompiana roa Le Perche tamin'ny taona 1823.
Nanjary nalaza be izy ireo tsikelikely Frantsa, ary niely eran'izao tontolo izao io laza io, indrindra fa tany Etazonia. Ny isan'ny santionany dia nitombo tamim-pahamendrehana vokatry ny Ady Lehibe Faharoa, satria nila nilanja fitaovana mavesatra be dia be izy ireo izay nanamboarana ny arabe sy ny tranon'ny tanàna, tanàna sns.
Mampiavaka ny soavaly percheron
Araka ny efa noresahintsika tany am-piandohana, ity karazana soavaly ity dia tena mampiavaka sy mampiavaka azy. Mirehareha a anatomy mahery ary a hatsaran-tarehy lehibe.
Lava somary lava ny loha, nefa tsy mandanjalanja velively, fa kanto. Mivelatra ny handriny, izay mifanohitra amin'ny sofiny kely. Ny maso dia lehibe.
Fohy, malalaka sy mazava hozatra ny vatana. Somary arched ny lamosina, ary malalaka koa ny tratra. Na dia biby lehibe aza ny tongotra, dia mifarana fohy amin'ny kitrokely goavambe sy mahatohitra tena.
Ny palitao mahazatra indrindra dia ny volom-bolo mainty na volondavenona, raha toa kosa ireo santionany amin'ny loko mainty na mainty dia tranga miavaka. Manana volo matevina sy rambony lava izy ireo.
Soavaly tena mora tohina sy mahatohitra izy ireo, ka mifanaraka amin'ny toetrandro rehetra. Ny heriny matanjaka dia mahatonga azy io ho soavaly lavorary amin'ny fitifirana sy fitaterana.
Ny habe sy ny lanja
Mikasika ny habeny dia afaka manavaka karazana soavaly percheron roa isika: ny an'ny fananganana kely (ny haavon'ny hazo fijaliana dia eo anelanelan'ny 1.50 sy 1.65 metatra) sy ny an'ny fisandratana lehibe (ny haavon'ny hazo fijaliana dia eo anelanelan'ny 1.65 sy 1.80 metatra).
Miankina amin'ny habe, hanana lanjany iray ihany koa isika. Biby manana habe kely kokoa dia manodidina ny 500-800 kilao, raha ny lehibe indrindra mahatratra ny 700-1200 kilao.
Soavaly percheron belza
Nandritra ny taona maro, ireo soavalina fantatra amin'ny anarana hoe soavalin'i Belzika dia nompiana tamina tanàna kely amin'ity firenena eropeana ity Ranst, toy ny natao tamin'ny andro taloha (amin'ny ahi-maitso, misy sakafo voajanahary, sns.). Izany no nahatonga ny soavaly Percheron Belzika ho iray amin'ny endrika matanjaka indrindra.
Nipoitra tamin'ny fiandohan'ny Taonjato faha-XVII, ary nosoratana ho toy ny karazany mety amin'ny 1886. Tsy ela akory dia niparitaka tany amin'ny faritra hafa amin'ny kaontinanta eropeana, ary hatrany America. Na izany aza, ankehitriny dia soavaly izay manana kopia kely vitsy satria vitsy ny mpiompy nifidy ny hanokan-tena ho an'ity Equine ity.
Soavaly lava izy ireo, manodidina manomboka amin'ny 1.70 ny santionan'ny olon-dehibe. Somary matevina ny vatana, misy hatoka hozatra lehibe ary lamosina fohy. Ny hoditra dia matevina sy maditra, mety tsara hanoherana ny ririnina mahery.
Matetika velona ny toetran'ireto biby ireto, amin'ny herimpo lehibe.
Ilay soavaly percheron Espaniola
Ny fanitarana ny soavaly Percheron dia tsy voamariky ny Saikinosy Iberiana, ary ity biby tsara tarehy ity koa dia niseho tamin'ny España.
Any amin'ny faritany Hispanika, ny soavaly Percherón dia nanao asa an-tsaha ihany koa, ary taty aoriana dia ekena ihany koa fa niseho matetika tao seho fiadiana omby.
Toy ny havany avaratra, dia manana vatana sy endrika miavaka izy io, nefa mety ho kely kokoa noho izy ireo, satria, ankoatr'ireo fototarazo arabo sy frantsay, ireo an'ny soavaly Flemish dia nampidirina ihany koa.
Soavaly percheron tampony
Ny fanirian'ny mpiompy maro hanatsara ny tenany dia mety hahatratra teny tsy ampoizina, ary izany dia nitranga tamin'ny tranga soavaly Percheron.
Raha ity biby ity dia efa iray amin'ireo matanjaka ara-batana sy lehibe indrindra fantatra, dia misy karazany maro izay lasa lavitra kokoa aza. Izahay dia manondro ilay fantatra amin'ny hoe soavaly persher ambony.
Tsy dia fahita loatra io biby io, fa nahavita nitsoaka tany amin'ireo biby lehibe indrindra eto an-tany izy. Efa nanao katalaogy santionany hatramin'ny 1.93 metatra ny halavany, saika tsy misy!
Tsy misy isalasalana fa ny fijoroana manoloana ny iray amin'ireto dia mitaky fametrahana, ary betsaka, inona no mahatonga antsika hieritreritra fa miatrika zavaboary nofinofy isika.
Ohatrinona ny soavaly ampondra?
Toy ny fitsipika ankapobeny, ny soavaly dia iray amin'ireo biby lafo indrindra vidy. Miankina amin'ny lafin-javatra maro ny vidiny: firazanana, taona, firaisana, fiaviana, sns.
Raha ny soavaly Percheron dia tsy ho hafa izany. Mazava ho azy, ho tombontsoany dia tsy maintsy lazaina fa io mpitaingin-tsoavaly io dia matetika tsy manana vidin'ny fividianana avo tahaka ny sasany amin'ny havany. Amin'ny ankapobeny, afaka mahazo percheron isika ho an'ny 4000-8000 €.
Ilay soavaly percheron lehibe indrindra eto an-tany
Taona vitsivitsy lasa izay, Shereen thompson, tantsaha kanadianina maotina, nanala sarona ny soavaliny Percheron iray, Nampiditra.
Ilay kely Nampiditra, niantso azy kely izahay tamin'ny feo mahatsikaiky, nanao ny vaovao izy noho ny fisehoany ivelany. Io biby io dia nanantona ny medaly an'ny soavaly lehibe indrindra eto an-tany. manana ny hahavony 3 metatra sy ny lanjany mihoatra ny roa taonina. Ankoatr'izay, ny tongony dia mirefy roa metatra eo ho eo, manapaka ny fitsarana an-tendrony izay nihevitra ny soavaly Percheron ho biby 'tongotra fohy'. Tranga tena miavaka.
Ny fitazonana biby toy izao dia tsy voatery ho mora, raha ny marina, ny tompony dia manome toky fa ny sakafony dia ahitana ahidratsy mihoatra ny roa isan'andro, siramamy sy voamaina efatra kilao sy rano ary rano 200 litatra mahery fotsiny.
Manantena izahay fa afaka nanampy anao hianatra bebe kokoa momba an'io karazana soavaly mahatalanjona io izay mitondra fomban-drazana be dia be ao ambadik'izany, ary izany dia nanjary sary masina tao anatin'ny sehatra Equine.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Soavaly percheron